Sekuphele iminyaka eyisithupha bevalelwe amanzi | News24
Sekuphele iminyaka eyisithupha bevalelwe amanzi
isithombe: lethiwe makhanyaKungesikhathi kade kunesiteleka samanzi ngoLwesine olwedlule.
UMPHAKATHI wasezindaweni ezahlukene ngaphansi kwakaVulindlela uthi usukhathele ukuphila ngokuphuza amanzi angcolile asemfuleni ngenjengoba sekuphele iminyaka eminingi ezinye zezindawo zingenawo amanzi.
Lo mphakathi udinwe wavala umgwaqo endaweni yaseKhokhwane ngoLwesine olwedlule mhla zili-16 kuNhlaba (May) ngamathayi avuthayo kanye namabhodlela uthi ufuna ukuvulelwa amanzi.
Endaweni yaseSongonzima bathi sekuphele iminyaka eyisithupha bevalelwe amanzi kanti kwezinye izindawo sekuphele izinyanga engekho amanzi.
Amalunga alemiphakathi avale yonke imigwaqo engenela kulezi zindawo ekhala ngokuthi afuna ukukhuluma neMeya yomasipala uMnu Themba Njilo ukuze ezobachazela ukuthi kungabe yini eyenza ukuthi bangabi nawo amanzi.
Umphakathi uthi umuzi nomuzi unompompi wamanzi kanti amanzi abephuma ngaphambilini ngaphandle kwezinkinga.
Bekhuluma ne-Echo ngoLwesine eliye ilunga lomphakathi lithe ngesikhathi ezohamba amanzi akekho umuntu owake wakhuluma nabo noma owake wabachazela ukuthi amanzi azovaleka.
“Amanzi avele anqamuka nje sangazi ukuthi kwenzenjani. Sesiphila ngamanzi esiwakha eziphethwini esiwaphuza nezinkomo. Into esixakayo ukuthi sinamathangi amanzi amakhulu amahlanu kaSongonzima agcwele amanzi kodwa futhi thina sihleli asinawo amanzi akukho nencazelo esiyitholayo,” kusho yena.
Elinye ilunga lomphakathi laseKhokhwane lithe sebezamile izikhathi eziningi ukukhuluma nekhansela laku lendawo uNks Thandi Madondo ukuzama ukuxazulula udaba lwenkinga yamanzi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya njengoba kuthiwa ikhansela belivele lingalubhadi emhlanganweni.
“Sibonile ukuthi vele ikhansela alifuni ukukhuluma nathi futhi alifuni ukusisiza yingako sinqume ukuthi size sivale umgwaqo ukuze sizozwakala.”
Lo mphakathi uphinde ukhale ngokuthi amaloli athwala amanzi ahamba emgwaqeni omkhulu kuphela nokwenza kube nzima ukuthi abanye abangekho eduze komgwaqo omkhulu bathole amanzi.
“Nawo lawo manzi esiwathola kulawomaloli athwala amanzi angcolile ayasigulisa. Awanazo ngisho izikhathi zokufika afika abaye bengekho besemsebenzini mawungazange uyibone uba nenkinga ngoba ugcina usuphuza amanzi esiphethwini,” kusho elinye ilunga lo mphakathi.
Lo mphakathi uvale umgwaqo kwaze kwaba kufika isekela meya likaMasipala uMsunduzi uMnu Thobani Zuma nofike wabathembisa ukuthi bazoyilungisa inkinga yamanzi.
UMnu Zuma uthe inkinga ekhona ukuthi imizi seyandile kangangokuba ithangi elikhulu eliphakela lezi zindawo seliyahluleka ukuthi liziphakele zonke.
“Zikhona vele izindawo esizaziyo vele ukuthi zinenkinga yamanzi kanti siyazama ukuthi siyixazulule leyo nkinga. Wonke amadamu aphakela lezindawo amanzi aphansi kakhulu. Sesithumele ithimba ukuba liyohlola ukuthi kungabe yini imbangela yokuthi abe phansi kangaka.
“Uma ngabe sesitholile ukuthi yini inkinga sizobuya sizobika emphakathini futhi,” kubeka yena.
Uqhube wathi bengumasipala futhi basebenzela ekutheni bakwazi ukufaka isiphehli samanzi esikhulu(water pump) esizokwazi ukuthi siibe namandla ukuthi izindawo lezi ezingenawo amanzi zizokwazi ukuthi ziwathole.
Uthe okwamanje umphakathi usazoqhubeka uthole amanzi emalolini athwala amanzi njalo kuze kube kuxazululeka inkinga yamanzi.